သူတစ်ပါးကို ပြောင်းလဲဖို့ထက် သင့်ရဲ့ အမြင်တွေကိုပဲ ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပါ - Amawpyay
သူတစ်ပါးကို ပြောင်းလဲဖို့ထက် သင့်ရဲ့ အမြင်တွေကိုပဲ ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပါ
တစ်ခါက ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ သူဌေးကြီး တစ်ယောက်ဟာ မျက်စိရောဂါ တစ်ခုကို အပြင်းအထန် ခံစားနေရပါတယ်။ သူဌေးကြီးက
သူခံစားနေရတဲ့ ရောဂါ ဝေဒနာကို သက်သာ ပျောက်ကင်း စေဖို့ သမားတော် တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ပြောင်းလဲ ကုသပေမဲ့လည်း
သိသိသာသာ ထူးခြားကောင်းမွန် မလာတာကြောင့် စိတ်ညစ်နေပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နေလာရင်း မျက်စိရောဂါကို ကုသရာမှာ
ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောတဲ့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးအကြောင်းကို ကြားသိခဲ့တာကြောင့် သူဌေးကြီးဟာ သွားရောက်ပြသခဲ့ပါတယ်။
ဘုန်းတော်ကြီးက သူဌေးကြီးရဲ့ မျက်စိရောဂါ အခြေအနေကို သေသေချာချာ လေ့လာ သုံးသပ်ပြီးနောက် အခုလိုပဲ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ”
အမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းသွားမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ်တော့ အစိမ်းရောင် ရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အရာဝတ္တုများနဲ့သာ နေထိုင်သင့်ပြီး
အခြား အရောင်တွေကို မကြည့်မိအောင် ရှောင်ကြဉ်ရမယ်” လို့ မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ သူဌေးကြီးလည်း ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့ညွှန်ကြားချက်
အတိုင်း သူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ အရာဝတ္တုမှန်သမျှကို အစိမ်းရောင် ခြယ်သပြီးနေထိုင်လိုက်ပါတယ်။
ရက်အနည်းငယ်ကြာပြီး သူဌေးကြီးရဲ့ အိမ်ကို ဘုန်းတော်ကြီး ကြွလာတဲ့အခါမှာတော့ မြင်မြင်သမျှ အရာအားလုံးက အစိမ်းရောင်
ခြယ်ထားတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ သူဌေးကြီးက “ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့ အကြံပေးချက်အတိုင်း အခြားအရောင်တွေကို မကြည့်ရှုဘဲ
အစိမ်းရောင် တစ်မျိုးတည်းကိုသာ ကြည့်ရှုသင့်တယ် ဆိုလို့ မြင်မြင်သမျှ အရာအားလုံးကို အစိမ်းရောင်ခြယ်သထားပါတယ်။
အဆင်ပြေရဲ့လား” လို့ မေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ဘုန်းတော်ကြီးက အနည်းငယ် ပြုံးလိုက်ပြီး ” သြော် သူဋ္ဌေးကြီးရယ် ။
လွယ်တာကို ခက်အောင် လုပ်နေပါလား။ တကူးတက အပင်ပန်းခံ၊ ငွေကုန် ကြေးကျခံပြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ မြင်မြင်သမျှကို
အစိမ်းရောင်လိုက်ပြီး ခြယ်သနေစရာ မလိုပါဘူး။ သင်ရဲ့ မျက်လုံးတစ်စုံကိုသာ အစိမ်းရောင် မြင်ကွင်းတွေ ပေးစွမ်းနိင်မယ့် အစိမ်းရောင်
မျက်မှန် တစ်လက်ကို ဝယ်ယူပြီး သင်ရဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို ပြောင်းလဲပစ်လို့ ရတယ်လေ” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ အနည်းငယ် ဟာသလေး နှောထားပေမဲ့လည်း ပေးချင်တဲ့ အသိလေးတစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။
ဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ လူပေါင်းများစွာနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါ ကိုယ့်စိတ် ကိုယ်သဘောနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့
သူများ ရှိတတ်သလို မကိုက်ညီတဲ့သူများကိုလည်း တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အကြောင်း တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် စိတ်သဘောထားချင်း
မတိုက်ဆိုင်ကြတဲ့အခါ ပြဿနာတွေ တက်ကြရပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းနည်းကတော့ ကိုယ်နဲ့စိတ်သဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်
တဲ့ သူတွေကို တွေ့ဆုံတဲ့အခါ သူတို့ကို ပြောင်းလဲဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ သင် အရမ်း ပင်ပန်းသွားပါလိမ့်မယ်။ သူတို့နဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ
ရမယ့် ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုသာ လိုက်လျော ညီထွေ ပြောင်းလဲ ဆက်ဆံခြင်းက အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ။
Credit: Paradise (ရိုးရာလေး)
သူတဈပါးကို ပွောငျးလဲဖို့ထကျ သငျ့ရဲ့ အမွငျတှကေိုပဲ ပွောငျးလဲပဈလိုကျပါ
တဈခါက ခမျြးသာကွှယျဝတဲ့ သူဌေးကွီး တဈယောကျဟာ မကျြစိရောဂါ တဈခုကို အပွငျးအထနျ ခံစားနရေပါတယျ။ သူဌေးကွီးက
သူခံစားနရေတဲ့ ရောဂါ ဝဒေနာကို သကျသာ ပြောကျကငျး စဖေို့ သမားတျော တဈယောကျပွီး တဈယောကျ ပွောငျးလဲ ကုသပမေဲ့လညျး
သိသိသာသာ ထူးခွားကောငျးမှနျ မလာတာကွောငျ့ စိတျညဈနပေါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ နလောရငျး မကျြစိရောဂါကို ကုသရာမှာ
ဂုဏျသတငျးကြျောဇောတဲ့ ဘုနျးကွီးတဈပါးအကွောငျးကို ကွားသိခဲ့တာကွောငျ့ သူဌေးကွီးဟာ သှားရောကျပွသခဲ့ပါတယျ။
ဘုနျးတျောကွီးက သူဌေးကွီးရဲ့ မကျြစိရောဂါ အခွအေနကေို သသေခြောခြာ လလေ့ာ သုံးသပျပွီးနောကျ အခုလိုပဲ ပွောလိုကျပါတယျ။ ”
အမွနျဆုံးပြောကျကငျးသှားမှာပါ။ ဒါပမေဲ့ လောလောဆယျတော့ အစိမျးရောငျ ရှိတဲ့ ပတျဝနျးကငျြ အရာဝတ်တုမြားနဲ့သာ နထေိုငျသငျ့ပွီး
အခွား အရောငျတှကေို မကွညျ့မိအောငျ ရှောငျကွဉျရမယျ” လို့ မှာကွားခဲ့ပါတယျ။ သူဌေးကွီးလညျး ဘုနျးတျောကွီးရဲ့ညှနျကွားခကျြ
အတိုငျး သူရဲ့ပတျဝနျးကငျြမှာ ရှိတဲ့ အရာဝတ်တုမှနျသမြှကို အစိမျးရောငျ ခွယျသပွီးနထေိုငျလိုကျပါတယျ။
ရကျအနညျးငယျကွာပွီး သူဌေးကွီးရဲ့ အိမျကို ဘုနျးတျောကွီး ကွှလာတဲ့အခါမှာတော့ မွငျမွငျသမြှ အရာအားလုံးက အစိမျးရောငျ
ခွယျထားတာကို တှလေို့ကျရပါတယျ။ သူဌေးကွီးက “ဘုနျးတျောကွီးရဲ့ အကွံပေးခကျြအတိုငျး အခွားအရောငျတှကေို မကွညျ့ရှုဘဲ
အစိမျးရောငျ တဈမြိုးတညျးကိုသာ ကွညျ့ရှုသငျ့တယျ ဆိုလို့ မွငျမွငျသမြှ အရာအားလုံးကို အစိမျးရောငျခွယျသထားပါတယျ။
အဆငျပွရေဲ့လား” လို့ မေးလိုကျပါတယျ။ အဲဒီအခါ ဘုနျးတျောကွီးက အနညျးငယျ ပွုံးလိုကျပွီး ” သွျော သူဋ်ဌေးကွီးရယျ ။
လှယျတာကို ခကျအောငျ လုပျနပေါလား။ တကူးတက အပငျပနျးခံ၊ ငှကေုနျ ကွေးကခြံပွီး ပတျဝနျးကငျြမှာ ရှိတဲ့ မွငျမွငျသမြှကို
အစိမျးရောငျလိုကျပွီး ခွယျသနစေရာ မလိုပါဘူး။ သငျရဲ့ မကျြလုံးတဈစုံကိုသာ အစိမျးရောငျ မွငျကှငျးတှေ ပေးစှမျးနိငျမယျ့ အစိမျးရောငျ
မကျြမှနျ တဈလကျကို ဝယျယူပွီး သငျရဲ့ မွငျကှငျးတှကေို ပွောငျးလဲပဈလို့ ရတယျလေ” လို့ ပွောလိုကျပါတယျ။
ဒီအကွောငျးအရာလေးကတော့ အနညျးငယျ ဟာသလေး နှောထားပမေဲ့လညျး ပေးခငျြတဲ့ အသိလေးတဈခုတော့ ရှိပါတယျ။
ဘာလဲဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့ဟာ နစေ့ဉျနဲ့ အမြှ လူပေါငျးမြားစှာနဲ့ ပွောဆိုဆကျဆံတဲ့အခါ ကိုယျ့စိတျ ကိုယျသဘောနဲ့ ကိုကျညီတဲ့
သူမြား ရှိတတျသလို မကိုကျညီတဲ့သူမြားကိုလညျး တှရေ့တတျပါတယျ။ အကွောငျး တဈစုံတဈရာကွောငျ့ စိတျသဘောထားခငျြး
မတိုကျဆိုငျကွတဲ့အခါ ပွဿနာတှေ တကျကွရပါတယျ။ အကောငျးဆုံး ဖွရှေငျးနညျးကတော့ ကိုယျနဲ့စိတျသဘောထားခငျြး မတိုကျဆိုငျ
တဲ့ သူတှကေို တှဆေုံ့တဲ့အခါ သူတို့ကို ပွောငျးလဲဖို့ မကွိုးစားပါနဲ့။ သငျ အရမျး ပငျပနျးသှားပါလိမျ့မယျ။ သူတို့နဲ့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံ
ရမယျ့ ကိုယျ့ရဲ့စိတျကိုသာ လိုကျလြော ညီထှေ ပွောငျးလဲ ဆကျဆံခွငျးက အကောငျးဆုံးပဲ ဖွဈပါတယျ ။ ။
Credit: Paradise (ရိုးရာလေး)
အရာရာ ဆုံးရှုံးခဲ့မယ် ဆိုရင်တောင် စိတ်ဓာတ် မဆုံးရှုံးစေနဲ့
အရာရာ ဆုံးရှုံးခဲ့မယ် ဆိုရင်တောင် စိတ်ဓာတ် မဆုံးရှုံးစေနဲ့ လောကကြီး တစ်ခုလုံးမှာ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားသမျှ အားလုံး ဆုံးရှုံး သွားပြီလား။ ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုရာမှာ ပစ္စည်းဥစ္စာ မှ မဟုတ်ပါဘူး။ မိဘ ၊ မိတ်ဆွေ၊ အပေါင်းအသင်း၊ မျှော်လင့်ချက် ၊ အလုပ် အရာရာတိုင်း ပါဝင်နေပါတယ် ကံကြမ္မာ အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုအောက်မှာ အရာအားလုံး မျက်လှည့် ပြလိုက်သလိုမျိုး ပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီး ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားသမျှ လက်လွှတ်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မျိုးတွေ ကြုံဖူးပါသလား။ ရှေ့တစ်လှမ်းတိုးဖို့တောင် အားအင်တွေ မရှိတော့တာမျိုး။ လောကကြီး ထဲကနေ ထွက်ပြေးသွားချင်တဲ့အချိန်မျိုးတွေ ကြုံနေပြီလား။ တစ်ခုခုလုပ်တဲ့အခါ တိုင်ပင်ဖို့ သူငယ်ချင်းတွေ.. ကိုယ်လဲကျတဲ့အခါ ထူပေးဖို့ မိတ်ဆွေတွေ.. မရှိတော့တဲ့အခါ တမ်းတမနေပါနဲ့။ ကိုယ်မွေးကတည်းက ကိုယ့်ဘေးနားမှာ …
အသည်းကွဲပြီးမှ မိန်းကလေးတွေ ပိုလှလာတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား
အသည်းကွဲပြီးမှ မိန်းကလေးတွေ ပိုလှလာတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား အသည်းကွဲ သွားတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်က ပိုပြီး လှလာတတ် တယ်တဲ့ တကယ်တော့ ပိုပြီးလှ လာတာ မဟုတ်ဘူး အရင်ကတည်း လှပြီးသားကို အခုမှ ရုပ်ထွက် လာတာပါ သူနဲ့ လမ်းမခွဲခင် တုန်းက ဆံပင်အရှည်လေး ထားပါ ဆိုတဲ့ စကားလုံး လှလှလေးတွေကြောင့် ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ဆံပင်အတိုလေးတွေနဲ့ မညှပ်ဖြစ်ခဲ့ ဘူး ဆံပင်ရှည်ကြီးနဲ့ အသက်ကလေး ငယ်ငယ်နဲ့ ရုပ်ရင့်သွားသလိုလို ဖြစ်နေတာပါ ။ သူနဲ့ လမ်းမခွဲခင် တုန်းက ဟိုလို မဝတ်ပါ နဲ့လား ဒီလို မဝတ်ပါနဲ့ ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေကြားမှာ ကိုယ်နဲ …
သင့်ရဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ဖြစ်တည်မှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကဲ့ရဲ့ခံခဲ့ရဖူးလား?
သင့်ရဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ဖြစ်တည်မှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကဲ့ရဲ့ခံခဲ့ရဖူးလား? တစ်နည်းအားဖြင့် Body Shamingအလုပ်ခံခဲ့ရဖူးလား? ဒါမှမဟုတ် သင်ကိုယ်တို င်ကရော သူများရဲ့ဖြစ်တည်မှုကို ဝေဖန်ရှုတ်ချ တတ်တဲ့ သူမျိုးလား? Body Shaming လုပ်တယ် ဆိုတာဟာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမြဲလိုလို ကြုံတွေ့နေ ရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ပဲဖြစ် ပါတယ် ။ တစ်ချို့တွေဆို ဝေဖန်ခံ ရတာ များလွန်း လို့ နေသားကျ သွားတာမျိုးတောင် ရှိတတ် ပါတယ်။ လူရယ်လို့ဖြစ် လာရင် အားနည်းချက် ကိုယ်စီ ရှိကြ တာ ပါပဲ။ ပြည့်စုံနေတဲ့ လူရယ် လို့မရှိပါ ဘူး။ ၀ချင် ၀မယ်၊ ပိန်ချင် ပိန်မယ်၊ ဆံပင်ပါး …